GALLERY: Zim President Mnangagwa survives 'assassination attempt' | News24
Africa > Zimbabwe > GALLERY: Zim President Mnangagwa survives 'assassination attempt'
Vice President Rtd General Chiwenga delivers a speech during a rally in Bulawayo on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / ZINYANGE AUNTONY
A man holds of a picture of Zimbabwe President at a rally in Bulawayo on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / ZINYANGE AUNTONY
Injured people are evacuated after an explosion at the stadium in Bulawayo where Zimbabwe President just addressed a rally on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / Ken MAUR / Zimbabwe OUT / DO NOT USE ON TWITTER
Injured people lie on the ground after an explosion at the stadium in Bulawayo where Zimbabwe President just addressed a rally on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / KEN MAUR / Zimbabwe OUT / DO NOT USE ON TWITTER
People attend a rally of Zimbabwe's President in Bulawayo on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / ZINYANGE AUNTONY
Zimbabwe soldiers provide security as Zimbabwe President addresses a rally in Bulawayo on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / ZINYANGE AUNTONY
Supporters of Zimbabwe's President attend a rally in Bulawayo on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / ZINYANGE AUNTONY
An injured man, wearing a bloodstained ZANU-PF shirt carrying the image of Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa, lays on a hospital bed in Bulawayo on June 23, 2018, following an explosion at the end of an electoral rally of the President. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / - / Zimbabwe OUT / DO NOT USE ON TWITTER
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa addresses a rally in Bulawayo on June 23, 2018. An AFP correspondent reported multiple injuries but could not immediately give a precise toll after a blast at a ruling ZANU-PF party rally today. Images broadcast on Zimbabwean TV showed scenes of chaos and medics fighting to save those wounded by the blast at the White City stadium in the country's second city Bulawayo. / AFP PHOTO / ZINYANGE AUNTONY